PC-RADIO ADỊGHỊ ARỤ ỌRỤ: AKPATA NA NGWỌTA - ESI MEE - 2019
Ihe kpatara PC-Radio adịghị arụ ọrụ: isi ihe kpatara na ngwọta ha
PC Radio - Usoro mmemme dị mma maka ige ntị iyi egwu dị na kọmputa. Na listi ọkpụkpọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ redio nke ụlọ na nke mba ọzọ, ọwa na akwụkwọ ọdịyo, ozi na mgbasa ozi - onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ egwu ha chọrọ. Otú ọ dị, ọnọdụ nwere ike imeri nkwụsị mberede nke arụ ọrụ nke usoro ihe omume ahụ.
Wepu usoro nke PC-Radio
Isi nsogbu. nke nwere ike ibili:
- ụda na-apụ n'anya ma ọ bụ nkwụsị
- Ụlọ redio ọ bụla anaghị arụ ọrụ
- usoro mmemme freezes na anaghị aza ịpị
Ọ bụ ezie na ndepụta dị obere, nsogbu nke ọ bụla nwere ike ibili maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Isiokwu a ga-atụle ihe ngwọta niile maka nsogbu.
Enweghị ụda na PC-Radio
Nsogbu kachasịsịsị na mmemme ndị ọkachamara n'ịkpọ egwu bụ enweghị ụda. Kedu ihe nwere ike ịbụ ihe kpatara ụda ahụ anaghị abịa site n'usoro ihe omume ahụ?
- ihe mbụ ịchọrọ bụ Ọrụ njikọ Ịntanetị. Ọ na-ada ụda nke ukwuu, mana ọtụtụ ndị ọrụ anaghị achọpụta na mgbe ha na-akpọ redio, ha enweghị Intanet. Jikọọ modem ma ọ bụ họrọ ebe Wi-Fi - ozugbo ị jikọsịrị na netwọk ahụ, usoro ahụ ga-amalite igwu egwu.
- ugbua na ugbua echichi, ihe omume a nwere ike imeri site na anya firewall. Nchedo HIPPS nwere ike ịrụ ọrụ (ntinye ahụ chọrọ ka e mepụta faịlụ nwa oge, nke nwere ike ọ gaghị amasị firewall na ntọala onye ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ njedebe na-arụ ọrụ). Dabere na ntọala nke nchebe, PC-Radio nwere ike igbochi na ndabere maka ịnweta netwọk, ihe mgbaàmà ahụ ga-abụ otu dị na paragraf ahụ dị n'elu. O doro anya, ọ bụrụ na ntọala ntọala na-egosi njirimara onye ọrụ mgbe netwọk ọrụ nọ na-achọpụta site na mmemme ahụ, a ga-emeghe windo mmapụta na-ajụ onye ọrụ otú e si emeso usoro ihe omume ahụ. Ọ bụrụ na firewall dị na ọnọdụ akpaka, mgbe ahụ, a ga-ahazi iwu ndị a na - enweghị ihe ọ bụla - ọtụtụ mgbe ka ọ na - ejikọta usoro ahụ na Ịntanetị. Iji kpọghee ohere, gaa na ntọala nche ma debe iwu maka ikikere faịlụ PC-Radio.
- Obere oge enwere nsogbu na mpaghara redio. Nsogbu ọkachamara abụghị ihe omimi, ya mere ọ bụrụ otu telivishọn na-adịghị egwu, na ndị ọzọ na-ada ụda n'enweghị nsogbu - ọ ga-adị mma ichere oge ụfọdụ (site na nkeji 5 ruo ụbọchị ma ọ̄ bụ karịa, dabere na ntụziaka nke iyi egwu) mgbe a ga-eweghachite mgbasa ozi ahụ.
- ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ụlọ ọrụ redio ahụ kwụsịrị na ndepụta ndepụta, enwere ọtụtụ nhọrọ: ma ọ bụrụ na ikpe ahụ a kọwara n'elu, ọ dị gị mkpa ichere, ma ọ bụ gbalịa iji aka gị mee ka listi redio jiri aka (jiri bọtịnụ pụrụ iche) ma ọ bụ malitegharịa usoro ahụ (mechie ya ma mepee ya ọzọ).
- na e nwere ụlọ ọrụ redio dị mkpa, Internet dịkwa n'ebe ahụ, a na - emekwa redọn redio enyi - ụda na-ada ụda? Nsogbu kachasị mma bụ obere ọsọ ịntanetị. Lelee njirimara ọrụ nke onye na-enye gị, megharia modem, gbanyụọ ihe omume ndabere - ọ bụrụ na iyi ahụ adịghị arụ ọrụ ọ bụla na nbudata ọrụ nke ihe nkiri kachasị amasị gị, ma eleghị anya onye ejikọrọ na Ịntanetị ma na-agbanye ihe. Na nsụgharị akwụ ụgwọ, ị nwere ike belata ogo iyi egwu, ihe omume ahụ ga-abụ ihe na-achọ ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na Ịntanetị dị ike, ọ dịghịkwa mkpa maka ọdịdị nkịtị, ihe bụ isi bụ njikọ na-adịgide adịgide.
- Nkọwapụta nke usoro mmemme Windows bụ na ọ bụ maka amaghị ihe ọ bụla, ha nwere ike ịnwụ ma kwụsị. Nke a na-emetụtakwa PC-Radio - usoro ihe arụ 100% na RAM, mmetụta nke mmemme ọjọọ nwere ike imetụta ọrụ ahụ. Bido mmemme ndị na-adịghị mkpa, kwụsị usoro ndị na-adịghị mkpa n'oge ahụ, melite antivirus ma lelee disks maka mmemme na usoro ihe ọjọọ. N'ọnọdụ ndị dị oke njọ, a na-atụ aro iji wepụ ihe omume ahụ kpamkpam na ụlọ ọrụ pụrụ iche dị ka Revo Uninstaller na ntinyeghachi ya. Kpachara anya, ntọala mmemme na iwepụ kpam kpam agaghị azọpụta!
Enweghi ike igosi ngwa ngwa ngwa na nseta nke usoro ihe omume a, chere maka mmelite na ntaneti nke ozo ma obu tinye usoro ohuru ohuru.
- na ihe nsogbu na ndenye aha ikikere Kwesịrị ịchọta ọrụ nkwado nke onye nrụpụta ọrụ ahụ ozugbo, naanị ha nwere ike idozi nsogbu ndị a, na-eburu ibu ọrụ maka ego akwụgoro.
- na mbipute n'efu ụfọdụ ọrụ anaghị arụ ọrụ dị ka elekere mkpuchi na onye nhazi, ka ha wee rụọ ọrụ, ịkwesịrị ịzụta ndenye aha akwụ ụgwọ. Kpọtụrụ ajụjụ ndị a naanị weebụsaịtị gọọmenti!
Dị ka njedebe - nsogbu ndị dị na ọrụ nke usoro ihe omume ahụ na-esite n'amaghị Intanet ma ọ bụ njikọ ejighị n'aka, mgbe ụfọdụ, isi iyi egwu egwu ga-ata ụta. Jiri nsụgharị nke ụlọ ngwa ahụ, melite firewall ma jikọọ Internet ntanetị - na PC-Radio na-eme ka obi na-atọ onye na-ege ntị ụtọ nke ọma.